फर्सीको मुन्टा मिठो मात्र हैन छन् अनेकौँ फाइदाहरु…हेर्नुहोस् – yuwa Awaj
फर्सीको मु’न्टा भन्नसाथ तपाईंको मु’खमा पानी आउँछ । धेरैका लागि यो स्वादिलो सब्जी हो । बेथे र लट्टेको स्वाद पनि ति’ख्खर हुन्छ । अतः यी सबै अहिलेको मौसमी सागपात हुन् । मौसम अनुकुल सागपात किन खाने ? दुई कारण छन् । एक, यसमा असली स्वा’द पाउन सकिन्छ ।
दोस्रो, आवश्यक पौ’ष्टिक तत्व पाइन्छ । हुन त हामी वे’मौसमी खानेकुरा खोजिरहेका हुन्छौ । तर, वे’मौसमको खानेकुरा श’रीरका लागि त्यती ला’भदायक हुन्दैन । किनभने वे’मौसमी उत्पादनका लागि कृ’तिम शैली अपनाइन्छ । प्रा’कृतिक रुपमा उ’ब्जाउ भएको हुँदैन । त्यसैगरी वेमौसमी खानेकुरा फलाउन, भण्डारण गर्न केही यस्ता तरिका अपनाइन्छ, जो त्यती स्वस्थ्यकर हुँदैन ।
अहिले वर्षायाममा सुरु भइसकेको छ । यतिबेला फर्सीको मु’न्टा, बे’थे, ल’ट्टे जस्ता सागपात प्रशस्तै पाइन्छ । यी सागपात निकै लाभदायक हुन्छ, स्वा’स्थ्यका लागि ।
फर्सीको साग किन खाने ? फर्सीको मु’न्टा फाइबरको राम्रो स्रोत हो । यसले पा’चन यन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ । यसमा भि’टामिन ई, सी, ए, बी, पो’टासियम, फो’लिक ए’सिड, क्या’ल्सियम, क’पर, प्रो’टिन पाइन्छ ।
साथै यो आ’इरन, फ’स्फोरस जस्ता ख’निज पदार्थको स्रोत पनि हो । यसमा फा’इबर त पाइने नै भयो । फर्सीको पात तथा मु’न्टाको सेवनले हामीलाई कतिपय रोगको सं’भावनाबाट टाढा राख्छ । फ’र्सीको मु’न्टा खासगरी उच्च रक्त’चाप, को’लेस्ट्रोल, क्या’न्सर जस्ता रो’गबाट बच्न लाभदायक हुन्छ । फर्सीको मु’न्टामा हा’इपोग्लिसिएमिक नामक तत्व हुन्छ, जसले श’रीरमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ । पा’चन यन्त्रलाई त’न्दुरुस्त राख्न पनि यो उपोगी हुन्छ । यसमा पाइने पो’टासियमले पा’चन यन्त्रलाई चुस्त राख्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ ।
सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Prevनिमोनियाको घरेलु उपचार !(प्रयोग गर्ने तरिका सहित)
Nextटुसाएको चना एति धेरै लाभदायक…हेर्नुहोस् । पूरा पढी सेयर गर्नुहोस ।